အန်တီဖြူ – Grab Love Story
ကျနော်သည် ရန်ကုန်မြို့ ၏ဆင်ချေဖုံးမြို့နယ်တခုတွင်နေပါသည်။ ကျနော်တို့လမ်းထဲတွင် ကျနော် နှင့်အလွန် ခင်သော သူငယ်ချင်း မောင်မောင်တို့အိမ်ရှိသည်။ မောင်မောင့်ဖခင်သည် အစိုးရအရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပြီး အလွန် ဖေါ်ရွေသူဖြစ်ပါသည်။ မောင်မောင်၏မိခင်မှာ အနည်းငယ်မျက်နှာတည်သော်လည်း မောင်မောင့်သူငယ်ချင်း များကို မောင်မောင်ကဲ့သို့ပင် ဂရုစိုက်ပါသည်။ မောင်မောင့်တွင် အကိုတယောက် ညီမတယောက်ရှိပါသည်။ မောင်မောင့်အကိုသည်ဆေးကျောင်းတက်နေပြီး ညီမလေးမှာ ၁၀ တန်းတက်နေပါသည်။ မောင်မောင်နှင့် ကျနော်တို့မှာ ၁၀ တန်းတုံးက အတူတူ ဖြစ်သော်လည်း တက္ကသိုလ်တွင် မောင်မောင်က ကွန်ပျူတာ တက်နေပြီး ကျနော်က နည်းပညာတက်နေသူဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းမတူသော်လည်း မောင်မောင်တို့အိမ် သည် ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတသိုက် စတည်းချရာအိမ် စားအိမ်သောက်အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ မှာလည်း ဟော့ဟော့ ရမ်းရမ်းမဟုတ်သဖြင့် လူကြီးများနှင့်အဆင်ပြေကြပါသည်။ အိမ်တွင်သီချင်းနားထောင် ဂိမ်း အတူကစား လဘက်ရေဆိုင်အတူထိုင်ခြင်းများသာရှိပြီး အသောက်အစားကင်းကြသူများဖြစ်ကြသဖြင့် လူကြီးများနှင့် ပုလဲနံပသင့်ကြပါသည်။ ကျနော်တို့ စုပြီး ဖါသွားချကြသည်ကိုတော့ လူကြီးများမသိအောင် လုပ်ကြသဖြင့် ကိစ္စသိပ်မရှိလှပါ။ တခုခက်နေသည်က ဖါချပြီး အရသာတွေ့လာသောအခါ ကျနော့မှာ မောင်မောင့် အမေနှင့့်် ညီမလေးကို ကြည့်ကြည့်ပြီး စိတ်ထ လာကာ လီးတောင်လာတတ် ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အမေဘဲ ညီမဘဲဟုတွေးကာ စိတ်ဆင်ရိုင်းကို ချွန်းအုပ်နေခဲ့ရ ပါသည်။ ထလည်းထချင်စရာ မောင်မောင့်အမေမှာ ရုပ်ရည်ရော ကိုယ်လုံးပါ အလွန်လှသူဖြစ်ပြီး ညီမလေးကလည်း အမေနှင့် နင်လားငါလား လှသူဖြစ်ပါသည်။ မောင်မောင့်အဖေဦးလှထွန်းကို ကျနော်တို့က အန်ကယ်ထွန်း ဟုခေါ်ပြီး အမေဒေါ်ဖြူဖြူ ကိုတော့ အန်တီဟုသာ ခေါ်ကြပါသည်။ အန်တီသည် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးဒေါ်ခင်သန်းနု မျက်နှာပေါက်မျိုးဖြစ်ပြီး အသားလဲ အလွန် ဖြူပါသည်။ အန်တီ့ရင်သားများမှာ မတရားကြီးသည့်ထဲတွင်မပါ သော်လည်း တော်တော် တော့ ကြီးပါသည်။ တင်သားမှာလည်း ၀ိုင်းပြီး တော်တော်လှပါသည်။ ညီမလေးကလည်း အန်တီလောက်မရှိ သေးသော်လည်း အန်တီ့နောက်အမီလိုက်နေသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ၁၀ တန်းနှင့်မလိုက်အောင်ပင် ရင်သား တင်သားများက ထွားနေပါသည်။
ဒီနှစ်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင် မောင်မောင်က KMD မှ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတခုတက်နေသဖြင့် ကျနော့် မှာနေ့ခင်းပိုင်းတွင်တယောက်တည်းပျင်းနေရသည်။ ပျင်းပျင်းနှင့် အိမ်တွင်တယောက်တည်း အိပ်နေစဉ် အမေ ကခေါ်သဖြင့် အောက်ဆင်းလာရာ ဧည့်ခန်းထဲတွင် အန်ကယ်ထွန်းနှင့်အန်တီတို့ထိုင်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရ သည်။
“သားရေ ဒီမှာ မင်းအန်ကယ်တို့လာခွင့်တောင်းနေတယ်၊ မင်းအန်တီမန္တလေးမှာ သူ့အဖွားနေမကောင်းတာ သွားကြည့်မလို့ မောင်မောင်ကလဲ မအားတော့သားကို အဖေါ်ခေါ်သွားချင်လို့တဲ့။ တပါတ်လောက် လိုက်သွားလိုက်ပါသားရယ် သားလဲ မန္တလေးရောက်ဖူးသွားတာပေါ့။”
“ဟုတ်တယ်သားရဲ့၊ အန်ကယ်ထွန်းကလည်းမအားတော့ မင်းအန်တီတယောက်ထဲစိတ်မချလို့ သားကို အဖေါ်ထည့်လိုက်ချင်လို့ မမတို့ဆီမှာလာခွင့်တောင်းနေတာ။ မင်းလိုက်မယ်မို့လား။”
“အာ အန်ကယ်ထွန်းကလဲ၊ သားကမန္တလေးရောက်ဖူးချင်နေတာနဲ့ အတော်ဘဲ၊ အမေတို့ခွင့်ပြုလို့ကတော့ လိုက်ပြီးသားဘဲ။ လိုက်မယ်။ သားလိုက်မယ် အန်ကယ်ထွန်း။ ဘယ်တော့သွားမှာလဲဟင်။ ထွေးထွေး ကောပါမှာလား”
“မင်းညီမကလဲ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းက နက်ဖန်ဆိုစတော့မှာ၊ လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့တူဝရီးနှစ်ယောက်ဘဲ သွားရမှာ၊ ဒါဆို နက်ဖန်ကားလက်မှတ်ဝယ်ပြီး သဘက်ခါစနေနေ့မှာ သွားကြလေ။”
ကျနော်တို့ပြောနေသည်ကို ပြူံးကြည့်နေသောအန်တီ့ကိုမြင်ရသည်မှာ အလွန်လှပြီး အလွန်ချစ်စရာ ကောင်းနေပါသည်။ ကျနော့မှာ အန်တီနှင့် ၂ ယောက်ထဲအတူခရီးသွားရမည်ဆိုသဖြင့် အလွန်ပင်ပျော်ရွင် နေမိပါတော့သည်။
ဒီလိုနှင့် စနေနေ့ရောက်လာပါသည်။ ကျနော်နှင့်အန်တီ့ကို အန်ကယ်က အောင်မင်္ဂလာထိလိုက်ပို့ပြီး ပြန်သွား ပါသည်။ အန်တီက ရင်စေ့ဘလောက်အင်္ကျိနှင့် ကီမိုနို ထမီဝတ်လာပါသည်။ ကျနော်ကတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ပွပွနှင့် တီရှပ်နှင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တိူ့စီးရသည့်ကားမှာ Elite ဖြစ်ပြီး ကားကြီးမှာသစ်လွင်ပြီး အလွန် ခေတ်မှီပါသည်။ ကားပေါ်မတက်မီ အန်တီက
“သားရေ၊ အန်တီတို့လမ်းမှာ ပိုအဆင်ပြေအောင် သားက အန်တီ့ကို မေမေလို့ခေါ်နော်၊ သားအမိလို့ထင်တော့ လူတွေလဲ သိပ်မနှောင့်ယှက်တော့ဘူးပေါ့။”
“သြော်၊ မေမေ လို့ခေါ်ပါဆိုနေ၊ ခုကတည်းကခေါ်တော့လေ။”
“ဟင်းဟင်းဟင်း၊ ဒါမှ မေမေ့သားကွ။”
ကားစထွက်လာတော့ အန်တီက ပြတင်းပေါက်ဘက်ကထိုင်ပြီး ကျနော်က လျှောက်လမ်းဘက်ကထိုင်လိုက် လာပါသည်။ အန်တီက ကျနော့ဘက်ကို ကိုယ်ကိုစောင်းလိုက်ပြီး ကျနော့နားနားကပ်ကာ တိုးတိုးလေး
“သား မေမေနဲ ခရီးသွားရတာပျော်ရဲ့လား”
အန်တီက ပြတင်းပေါက်ဖက်သိပ်မကပ်ဘဲ ကျနော့ဘက်နဲနဲတိုးကာ အသားချင်းထိ၍ ထိုင်နေပါသည်။ ကျနော့မှာ အန်တီ့ပေါင်သားနှင့်ထိနေသောနေရာက အိနေပြီးချက်ချင်း လီးတောင်လာသဖြင့် ပေါင်နှင့် ညှပ်ထား လိုက်ရပါသည်။ ကားထွက်လာပြီး တနာရီလောက်ကြာသည်နှင့် အပြင်တွင်မှောင်လာပါသည်။ ကားထဲတွင် လည်း ထွက်ခါစက မီးအလင်းထွန်းထားသော်လည်း ခုတော့ မီးကိုမှိန်မှိန်လေးသာ ထွန်းထား ပါတော့သည်။ ကျနော်ဘေးပတ်လည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်တို့၏ဘေး တခြားဘက်တွင် အသက်ကြီးကြီး အဖွားကြီး နှစ်ယောက်ထိုင်နေပြီး ရှေ့ နှင့်နောက်ကိုတော့ ခုံကမြင့်သဖြင့် မမြင်ရပါ။ ကျနော်တို့ခုံမှာ နောက်ဆုံး ခုံတန်းရှည် ၏အရှေ့ တခုံဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးခုံတန်းရှည်တွင် ခရီးသည် မတင်ဘဲ တွဲဖက်ဒရိုင်ဘာနှင့် စက်ပြင်တို့ အိပ်ကြ ပါသည်။ ကား Air con ကတော်တော်အေးသဖြင့် ကားမှပေးသောစောင်ကိုခြုံထားရပါသည်။ အန်တီက ကျနော့ကိုမှီထားပြီး သူ့လက်က ကျနော့ပေါင်ပေါ်တင်ထားပါသည်။ ခနနေသောအခါ အန်တီက သားဒီဘက်လာ မေမေအဲဒီဘက်ကထိုင်မယ်ဟုဆိုလာသဖြင့် ကျနော် ပြတင်းပေါက်ဘက်ပြောင်းထိုင်လိုက်ပါသည်။ အန်တီက ကျနော့ဘက်ကျောမမှီတော့ဘက် ကျနော့ ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းဝင်ကာကျနော့ခါးကိုဖက်ပြီးအိပ်ပါတော့သည်။
ကျနော်နှင့် အန်တီမှာ ရင်ချင်းအပ်နေပြီး အန်တီ့နို့နှစ်လုံးမှာ ကျနော့ရင်ဘတ်နှင့်ထိနေပြီး ကျနော့မှာ အသက်ရှူ မှားနေရပါတော့သည်။ အန်တီ့မျက်နှာမှာ ကျနော်၏လည်ပင်းနားတွင်ရောက်နေပြီး အန်တီရှူထုတ်လိုက်သော လေသည် ကျနော့လည်ပင်းကိုတိုးနေပါသည်။ အန်တီ၏ဘယ်ဘက်လက်သည်ကျနော်၏ခါးအောက်တွင် ရှိနေပြီး ညာဘက်လက်သည် ကျနော်၏ပေါင်နှစ်ချောင်းလုံးကိုသိုင်း၍ ဖက်ထားပါသည်။ ကျနော့ကိုယ်လုံးနှင့်ထိနေသော အန်တီ၏အသားများသည်အိစက်နေပြီး ကျနော်၏လီးမှာလည်း တရားလွန် တောင်နေတော့ရာကျနော့်မှာ အလွန်ပင်အရသာတွေ့နေပါတော့သည်။ ဖါသည်မများကို လိုးခဲ့ဘူးသော်လည်း အခန်းထဲဝင် အ၀တ်အစားချွတ်၊ လိုး၊ ပြီးတော့ပြန်ထွက်သာလုပ်ခဲ့ရရာ မိန်းမတယောက်၏ အသားနှင့် ခုလို ကြာရှည်ထိထားရတဲ့အရသာ နောက်ပြီး လူတွေကြားမှာ ခိုးစားရတဲ့အရသာ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းအမေ အန်တီနဲ့ ဆိုတော့ ကျနော့မှာ အရှင်လတ်လတ် နတ်ပြည်ရောက်နေရပါတော့သည်။ နာရီဝက်ခန့်ကြာသောအခါ အန်တီက သိုင်းဖက်ထားသော ညာလက်ကိုအနည်းငယ်နောက်ဆုတ်လိုက်ပြီး ကျနော်၏ပေါင်တချောင်းကိုသာ ကိုင်ထား ပါတော့သည်။ အန်တီ၏ လက်ချောင်းများက ကျနော်၏ပေါင်ကြားသို့ဝင်နေပါသည်။ ကျနော်လည်းမထူးဇတ်ခင်း၍ ကျနော့်ပေါင်ကို အသာလေးဟပေးထားလိုက်ရာ အန်တီ၏လက်ချောင်းများသည် တောင်မတ်နေသော ကျနော့လီးနှင့် လာထိနေပါတော့သည်။ ခနဘဲကြာပါသည် အန်တီက ကျနော်၏လီးကို သူ့ လက်ချောင်းများဖြင့် အသာကိုင်လိုက်ပြီးညှစ်လိုက်လျှော့လိုက်လုပ်ပေးနေပါသည်။ အန်တီ့နှာခေါင်းမှ အသက် ရှူသံမှာလည်း ပြင်းလာပါသည်။ အန်တီက ကျနော့ဂျင်းဘောင်းဘီဇစ်ကိုအသာဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီး သူ့လက်ကို အထဲထည့်လိုက်ပါသည်။ ကျနော်က အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်လေ့မရှိသောကြောင့် အန်တီ့လက်သည် ကျနော့ လီးကိုတိုက်ရိုက်ဆုတ်မိသွားပါတော့သည်။ အန်တီသည် ကျနော့လီးကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးပြီး ဂွင်းထု ပေးနေပါတော့သည်။ ကျနော်လည်း ရဲလာပြီး အန်တီ့အင်းင်္ကျီကြယ်သီးများကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာ ထဲ ကျနော်၏လက်ကိုနှိုက်သွင်းလိုက်ပါသည်။ အန်တီက ကျနော့လီးကိုကိုင်နေသောလက်ကို ခနရုတ်လိုက်ပြီး သူ့ကျောဘက်လက်လျှိုကာ ဘရာစီယာဂျိတ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်သူ့လက်ကို ကျနော့လီး ထံပြန်ပို့ပြီး ဂွင်းဆက်ထုပေးနေပါသည်။ ကျနော်လည်း ဘရာစီယာ ကိုအပေါ်လှန်တင်ပြီး အန်တီ့ နို့ကို ကျနော့ ညာလက်ဖြင့် အသာ အယာ ပွတ်ပေးလိုက် နို့သီးခေါင်းကို လက်ညှိုးလက်မ ဖြင့်ချေပေးလိုက် လုပ်ပေးနေ လိုက်ပါသည်။ အန်တီ၏ နို့သီးခေါင်းမှာတော်တော်ကြီးသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အန်တီ့နို့ကို တော်တော်ကြာကြာ နယ်ပြီးနောက် ကျနော် ရှေ့ဆက်တိုးချင်လာသဖြင့် ကျနော့်လက်ကို အန်တီ့ပေါင်ကြား ကိုရွှေ့လိုက်ပြီး အစတွင် ထမီပေါ်မှ အန်တီ့ စောက်ဖုတ်ကို အသာအယာပွတ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် အန်တီ့ထမီကိုဖြည်လိုက်ပြီး အန်တီ့ ပင်တီထဲ သို့လက်နှိုက်လိုက်ပါသည်။ အန်တီ၏ပင်တီဘောင်းဘီ သည် အသားပျော့ပျော့လေးဖြစ်ပြီး အန်တီက လည်း သူ့ပေါင်ကိုကားထားပေးလိုက်ရာ ကျနော်၏လက်မှာချောချောချူချူပင် အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီး ပေါ် ရောက်သွားပါတော့သည်။ ကျနော်လိုးခဲ့ဘူးသော ဖါသည်မ များသည် စောက်မွှေးထူပါသည်။ ခု အန်တီ့ စောက်ဖုတ်သည် စောက်မွှေး တပင်မျှမရှိဘဲ ချောမွတ်နေပါသည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ၏စောက်ဖုတ်ကြီးအား ပွတ်ပေးလိုက် စောက်ဖုတ် အမြှောင်းကြားထဲ လက်ညှိုးဖြင့် ပွတ်ပေးလိုက် စောက်စေ့အား လက်ညှိုးနှင့် လက်မ ဖြင့် ချေပေးလိုက်ဖြင့် တတ်သမျှမှတ်သမျှလုပ်ပေးနေရာ အန်တီ၏တကိုယ်လုံးလဲတုန်တုန်ရီရီဖြစ်လာပါတော့ သည်။ ဆက်ပြီး အန်တီ့ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ကျနော့လက် ခလယ်ကိုသွင်းလိုက်ရာ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးသည် စောက်ရေများဖြင့် ရွှဲနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျနော်လည်း လက်ခလယ်ဖြင့် အန်တီ့စောက်ဖုတ်အား မှန်မှန်လေး သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လိုးပေးနေလိုက်ပါသည်။ အန်တီမှာလည်း တကိုယ်လုံးကော့လန်နေပါ တော့သည်။ ကျနော်က လက်ခလယ်တချောင်းထဲလိုး နေရာမှ လက်နှစ်ချောင်း လက်နှစ်ချောင်းမှ သုံးချောင်းထိ တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ပြီး လိုးပေးနေလိုက်ပါသည်။ အစပိုင်းတွင် အန်တီက ကျနော့လီးကို မှန်မှန်ဂွင်းတိုက်ပေး နေသော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးအားကျနော် လက်ဖြင့် ကောင်းကောင်း သွက်သွက် လိုးပေးနေသောအခါ သူကျနော့လီးအားဆက် ဂွင်းမတိုက်နိုင်တော့ဘဲ တင်းတင်း ကျပ်ကျပ်သာ ဆုပ်ကိုင်ထား နေပါတော့သည်။ ဤသို့ခပ်သွက်သွက်လိုးပေးနေရင်းအတန်ကြာလာသောအခါ အန်တီ့ စောက်ဖုတ်သည် ကျနော့လက်အား အတင်းညှစ်လာသည်ကိုခံစားမိလာပြီးခနနေသောအခါ အန်တီ့မှာ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ အောင်တုံတက်လာပြီး ကျနော့လက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပေါင်ကိုစိကာ အသက်ပျင်းပျင်းရှူ ၍ ငြိမ်ကျသွား ပါတော့သည်။
န်တီတချီပြီးသွားသော်လည်း ကျနော့မှာတော့ လီးတောင်လျှက်ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ဖါသည်မများကိုလိုးတုံးက သူတို့ပြီး မပြီးဂရုမစိုက်ခဲ့ဘဲ ကိုယ်ပြီးသည်နှင့် ကျေနပ်ပြီး လီးဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်ခဲ့သော် လည်း အခု ကိုယ်မပြီး သေးဘဲ အန်တီ ကောင်းကောင်းပြီးသွားသည်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲတွင် ပို၍ ကျေနပ်နေ မိပါသည်။ သို့သော် သိပ်မကြာလိုက်ပါ အန်တီက ကျနော့လီးကိုပြန်ဆုပ်ကိုင်၍ ဂွင်းတိုက်ပေးပြန်ပါသည်။ ဂွင်းခနတိုက်ပေးပြီး အန်တီသည် နောက်သို့အနည်းငယ် ဆုတ်၍ ကိုယ်ကိုကုန်းလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် ကျနော်၏လီးအား သူ့ပါးစပ်ဖြင့် ငုံဆုပ်၍ ပုလွေမှုတ်ပေး ပါတော့သည်။ ဤတကြိမ်တွင် ကော့လန်နေသူမှာ ကျနော်ဖြစ်ပါသည်။ အန်တီသည် ပါးစပ်ဖြင့် ဂွင်းထုသလိုရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးလိုက် ထိပ်သီးလေး သက်သက်ကို စုပ်ပေးလိုက် လီးတချောင်းလုံးကိုယက်ပေးလိုက်နှင့် ပညာမျိုးစုံပြနေတော့ရာ ကျနော်လဲ လုံးဝမထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ ကော့တက် လာပြီး အန်တီ့ပါးစပ်ထဲ လရေများ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်။ အန်တီက ကျနော့လရေ များကိုမြိုချလိုက်ပြီး တစိမ့်စိမ့်ထပ်ထွက်လာနေသော လရေများကိုလည်း လျှာဖြင့်ယက်ကာ ယက်ကာမြိုချနေပါသည်။ ထို့နောက်အန်တီလည်း ကုန်းနေရာမှထလိုက်ပြီး ကျနော့ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲတင် ပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် သူ့ဘရာကိုလည်း ဂျိတ်ပြန်ချိတ်ပြီး အင်းကျီ ကြယ်သီးများကိုလည်းပြန်တပ်လိုက် ပါသည်။ အချိန်ကိုက်ပင် ခန ကြာသောအခါ ကားမီးများလင်းလာပြီး ကားသည် ၁၁၅ မိုင်တွင် တထောက်နားရန်ဝင် ရောက်လာပါတော့သည်။
ကားရပ်သောအခါကျနော်တို့လည်း သူများနည်းတူ ကားပေါ်မှဆင်းလိုက်ကြပြီး ရွှေခရားကြီးတွင် ထိုင်လိုက်ကြ ပါသည်။ ညစာ ထမင်းစားပြီး နောက်ဘက်သွားကာ အပေါ့အပါးသွားလိုက်ကြပါသည်။ ကားပေါ်မှဆင်းကတည်းက ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ကားပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့သည့် အကြောင်းများကို မသိသလို နေလိုက်ကြပြီး ခတ်တည်တည်ပင် သားအမိဇာတ်ခင်းနေကြပါသည်။ နာရီဝက်ခန့်ကြာသောအခါ ကျနော်တို့ အားလုံးကားပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ကြပြီး ကားသည်လည်း ၁၁၅ မိုင်စခန်းမှထွက်ခဲ့ပါတော့သည်။ အချိန်က ည ၈ နာရီခန့်သာ ရှိပါသေးသည်။ ကားထွက်လာပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ ကားမီးကို လုံးဝပိတ်လိုက်ကြပါသည်။ အန်တီက စောင်ကို လယ်ပင်းထိချုံထားပြီး ကျနော်ကတော့ ခေါင်းမြီးချုံလိုက်ပါသည်။ ဤတခါတွင်တော့ ကျနော်က အန်တီ့နို့ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ တိုက်ရိုက်ပင် စောက်ဖုတ်ဆီဦးတည်လိုက်ပါသည်။ အန်တီ့ ထမီကို ဖြည်လိုက်ပြီး ပင်တီဘောင်းဘီထဲ လက်နှိုက်လိုက်ပါသည်။ အန်တီက ဖင်အနည်းငယ်ကြွ၍ သူ့ဘောင်းဘီကို အသာချွတ်ချလိုက်ပြီး ထိုင်ခုံပေါ်တင်ထားလိုက်ပါသည်။ ကျနော်လည်း လွှတ်လွှတ်လပ်လပ် ပင် အန်တီ့ စောက်ဖုတ် ကို တိုက်ပွဲဝင်ပါတော့သည်။ စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်လိုက် စောက်စိကိုချေလိုက် လက်ညှိုးနှင့်လိုးလိုက် လုပ်နေရင်း ကျနော့စိတ်ထဲတွင် အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ယက်ချင်စိတ် တအားဖြစ်လာပါသည်။ ကျနော်သည် ခုံအောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်ဆင်းထိုင်လိုက်ပြီး အန်တီ့ပေါင်ကြားခေါင်းဝင်လိုက်ပါသည်။ အန်တီကလည်း ကြိုသိ နေသည့်အလား သူ့ဖင်ကြီးကို ရှေ့သို့နဲနဲတိုးပေးလိုက်သဖြင့် ကျနော့ ပါးစပ်နှင့် အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ တတန်းတည်း ဖြစ်သွားပါတော့သည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ နှာခေါင်းမြုတ်လိုက်ပြီး တရှိုက်မက်မက် နမ်းလိုက်ပါသည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးသည် အနံ့အသက်ကင်းစင်နေပြီး နမ်း၍ကောင်း လှသဖြင့် ကျနော်လည်း တရှုံ့ရှုံ့နမ်းနေမိပါတော့သည်။ စိတ်တိုင်းကျနမ်းပြီးမှ ကျနော်အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကို စ ယက်ပေးပါတော့သည်။ အန်တီကလည်း သူ့ချေထောက်နှစ်ချောင်းကို မြောက်၍ ခုံပေါ်တင်လိုက်ပြီး ပေါင်ကို ကားထားလိုက်ပါသည်။ ပေါင်ကိုကားထားလိုက်သဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးမှာအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီး ယက်ရသည်မှာ လည်း အားပါးတရ ရှိလှပါသည်။ ဒူးထောင်ပေါင်ကားပြီး စောင်ချုံထားသဖြင့် အပြင်မှကြည့်ပါက ကျနော်အန်တီ့ စောက်ဖုတ်ယက်နေသည်ကို ဘယ်လိုမှသိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ စောက်မွှေးမရှိဘဲ ပြောင်ချောနေပြီး ဖေါင်းကား နေကာ အသားမှာလည်း နုအိလှပါသည်။ ကျနော်က အန်တီ့ စောက်ဖုတ်ကို ယက်လိုက် စောက်စိကို ငုံစုတ်လိုက် စောက်ခေါင်းထဲ လျှာဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင် ထိုးထည့်လိုက် နှင့် အစွမ်းကုန် ကျိုးစားနေရာ အန်တီ့စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များထွက်လာပါသည်။ အန်တီ၏ စောက်ရည် သည် ချွဲတဲတဲ နှင့် အနည်းငယ် ချိုသလိုလို ရှိပါသည်။ ယက်နေရင်းနှင့်ပင်စီးထွက် လာသော စောက်ရည်များကို ကျနော်မြိုမြိုချ နေမိပါသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုယက်ရသည်က၊ို စောက်ရည် သောက်ရသည်ကို လုံးဝ ရွံရှာစိတ် လည်းမဖြစ်မိ ဘဲ ကျေကျေနပ်နပ် ယက်ပေးနေမိပါသည်။ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားမှန်းတော့ မမှတ်မိတော့ ပါ။ အန်တီ့ ဖင်လုံးကြီး တဖြေးဖြေး လှုပ်ခါလာပြီး ခနကြာသောအခါ တစပ်စပ် တုံလာပြီး ကျနော့ဆံပင်အား လက်နှင့် အတင်းဆွဲကာ ကျနော့မျက်နှာကို သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် အတင်း ဖိကပ်ထားလိုက်ပါတော့သည်။ ကျနော်လည်း အသက်ရှူကျပ်လာသဖြင့် ခေါင်းကိုအသာစောင်း၍ အသက်ခိုးရှူနေရပါသည်။ ခနနေသောအခါမှ သူ့လက် ဆွဲအားနဲနဲလျော့လာပါသည်။ သို့သော် သူ့ကိုယ်လုံးတစပ်စပ်တုံပြီးမောနေသည်မှာ အချိန်တော်တော် ကြာပါ သည်။ တော်တော်ကြာမှ အတုံရပ်သွားပြီး ကျနော့ ဆံပင်အားဆွဲထားသောလက်ကို လွှတ်လိုက်ပါတော့သည်။ ကျနော့မျက်နှာတခုလုံးလည်း အန်တီ့စောက်ရည်များဖြင့် ရွှဲရွှဲစိုနေပါတော့သည်။ အန်တီက သူ့ ဆလင်းဘက် အိပ်ထဲမှ တစ်ရှူးထုတ်ကို ထုတ်လိုက်ပြီး ကျနော့ မျက်နှာအားသုတ်ပေးပါသည်။ ပြီးတော့တခါ စနိုးတာဝါနှင့် ထပ်သုတ်ပေးပြန်ပါသည်။ သုတ်ပြီးသောအခါကျနော်လည်း ခုံပေါ်ပြန်တက်ထိုင် လိုက်ပြီး ဘေးဘီကိုကြည့်မိ ပါသည်။ ဘေး တဘက်ခုံမှ အဖွားကြီးနှစ်ယောက်မှာလောကကြီးနှင့် အဆက် ပြတ်ပြီး တခူးခူးနှင့် အိပ်မောကျ နေကြပါသည်။ သူတို့ဘေးခုံမှ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် နတ်ပြည်ကို အတက် အဆင်းလုပ်နေသည်ကို လုံးဝ သတိပြုမိပုံပင်မရပါ။
အန်တီကလည်းတာဝန်အလွန်ကျေပါသည်။ သူအမောပြေသွားသည်နှင့် ခုံအောက်ကိုဆင်းထိုင်လိုက်ပြီးကျနော့ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်ပါတော့သည်။ ဇစ်ဖွင့်ပြီး ကျနော့လီးကို မစုတ်သေးဘဲ ကျနော်၏ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ် ချလိုက်ပါသည်။ ဘောင်းဘီကိုလုံးဝချေထောက်မှ အကျွတ်ချွတ်လိုက်ပြီးဘေးတွင်ပုံထားလိုက်ပါသည်။ ကျနော်သည် စောင်အောက်တွင် အောက်ပိုင်း တုံးလုံးဖြစ်သွားပါတော့သည်။ ပြီးမှ ကျနော့လီးကိုပယ်ပယ် နယ်နယ်ကိုင်ပြီး ကောင်းကောင်းစုတ်ပါတော့သည်။ ဤတခါတွင်တော့အန်တီသည် လီးကိုယက်လိုက် လဥကို ယက်လိုက်နှင့် အချိန်ယူ၍ စိန်ပြေနပြေမှုတ်ပါတော့သည်။ ယခုအခါတွင် ကျနော်လည်း ပထမတခါကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ဘဲ ထိန်းနိုင်လာပါသည်။ အန်တီကလည်းအမြန်ပြီးအောင် အားစိုက်မမှုတ်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး မက်မက်မောမော စုတ်နေပါသည်။ အချိန်တော်တော်ကြာမှ အန်တီက အရှိန်တင်လိုက်ပြီး အားစိုက်မှုတ်ပေး တော့ရာ ကျနော်လည်း ပြီးချင်လာသဖြင့် ဆက်မထိန်းတော့ဘဲ အန်တီ့ပါးစပ်ထဲ အရှိန်ကုန်ပန်းထည့်လိုက် ပါတော့သည်။ ကျနော့လရည်များမှာလည်း မကုန်နိုင်မခန်းနိုင် ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ပန်းပန်းထွက်နေ ပါတော့သည်။ အန်တီက ပထမတခါကအတိုင်း ထွက်လာသမျလရည်များကို အကုန်မြိုချပြီး ထပ်ထပ်ထွက် ထွက်လာနေသော လရည်များကိုလည်း စောင့်ပြီး ယက်ယက်ပြီးမြိုချနေသည်မှာ အလွန်ပင် ကြည့်ကောင်း လှပါသည်။ ကျနော့လရည်လုံးဝမထွက်တော့မှ အန်တီက ရပ်လိုက်ပြီး ကျနော့အားဘောင်းဘီပြန်ဝတ်ပေး ပါသည်။ ပြီးမှ ခုံပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ပြီး ကျနော့်အားဖက်၍ အမှန်တကယ်အိပ်ပါတော့သည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ့အားပြန်ဖက်၍ အိပ်လိုက်ပါတော့သည်။ ကျနော်တို့သည် မန္တလေးရောက်သည်အထိကျန်သည့် ခရီးလမ်း တွင် နတ်ပြည်ဆက်မတက်တော့ဘဲ ကောင်းကောင်းအိပ်လိုက်ကြပါသည်။ ဒီလိုနှင့် မနက် ၃ နာရီခွဲကျော်ကျော် တွင် ကျနော်တို့ကားသည် မန္တလေးသို့ရောက်ခဲ့ပါတော့သည်။
မန္တလေးရောက်သည်နှင့်ကားပေါ်မှဆင်းလိုက်ကြပြီး အထုတ်များကိုယူကာ အန်တီဦးဆောင်ရာနောက် လိုက်ရပါ တော့သည်။ အန်တီက အိမ်တိုက်ရိုက်မသွားဘဲ ကားသမားကို ယူနီတီ ဟိုတယ်သို့မောင်းခိုင်းပါသည်။ ဟိုတယ်တွင် သားအမိအသွင်ဖြင့် ကုတင်နှစ်လုံးပါ အခန်းတခန်းယူလိုက်ပါသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်၏ အပြောအဆိုကိုကြည့်၍ မည်သူမျ အမှန်တကယ်သားအမိမဟုတ်ကြောင်းသိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ကလည်း သား၊ မေမေ နှင့် အခေါ်အပြောတည့်နေကြပါသည်။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် အန်တီက အိမ်သာအရင်ဝင်ပြီး ထွက်လာသောအခါ အ၀တ်အစားများချွတ်၍ အိပ်ယာပေါ်တက်ပြီး စောင်ချုံနေလိုက်ပါ သည်။ မီးဖွင့်ထားသဖြင့် အန်တီ၏ လုံးကြီးပေါက်လှ ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရသည်မှာ အလွန်ကြည့်၍ကောင်းလှပါ သည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ့ နည်းတူ အ၀တ်အစားများချွတ်လိုက်ပြီး မီးမှိတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး အန်တီ့ စောင်ချုံထဲဝင်လိုက်ပါသည်။ မီးမှိတ်လိုက်သော်လည်း မနက် ၅ နာရီကျော်နေပြီး မိုးလင်းစပြုနေပြီဖြစ်သဖြင့် ခန်းဆီးလိုက်ကာကြားမှ ၀င်လာ သောအလင်းရောင်ဖြင့် တဦးကိုတဦး ကောင်းကောင်းမြင်နေရပါသည်။ အန်တီက ကျနော့အားခပ်တင်းတင်း ဖက်ထားလိုက်ပြီး ကျနော်၏လည်ပင်းကို နမ်းနေပါသည်။ အခန်းက လေအေးပေးစက် ဖွင့်ထားသဖြင့် အေးနေ သောကြောင့် အန်တီကိုယ်လုံးကနွေးနေပြီး ဖက်ထားရသည်မှာ တော်တော်အရသာရှိလှပါသည်။ ကျနော့ပေါင်တချောင်းက အန်တီ့ပေါင်ကြားထဲရောက်နေပြီး အန်တီ့စောက် ဖုတ်ကြီးနှင့်ထိနေရာ ပူနွေးနေ ပါသည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ့မျက်နှာအားနေရာမလပ်ပြန်နမ်းနေလိုက်ပြီး မျက်နှာမှတဆင့် အောက်သို့ဆင်း ကာ လည်ပင်းကိုနမ်းလိုက်ပါသည်။ လည်ပင်းမှတဆင့် အောက်ထပ်ဆင်းကာ အန်တီ့ရင်ခွင်ထဲ နို့နှစ်လုံးကြား တွင် ခေါင်းဝင်ခွေ့ပြီး နိုးနှစ်လုံးစလုံးကို တဖက်ပြီးတဖက် နမ်းနေမိပါသည်။ ခနနမ်းပြီးမှ အန်တီ့နို့သီးခေါင်းကို ကျနော့ပါးစပ်ထဲထည့်၍ ကလေးများနို့စို့သလို တပြွတ်ပြွတ် စို့ပေးလိုက်ရာ အန်တီလည်း တအင်းအင်းနှင့် ညည်းနေပါတော့သည်။ ကျနော်က အန်တီ၏ နို့ နှစ်ဘက်လုံးအား တဘက် ပြီးတဘက် ပယ်ပယ်နယ်နယ်စို့ပေး လိုက် စို့နေရင်း လျှာနှင့်ဖိယက်လိုက်နှင့် ကောင်းမည်ထင်သလို လျှောက် လုပ် နေတော့ရာ အန်တီ့မှာ ကျနော့ အား အတင်းဖက်ထားပါတော့သည်။ ကျနော်နို့စို့၍ အတော်ကြာတော့မှ နို့စို့ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း အောက်ဘက်ကိုထပ်ဆင်းပါတော့သည်. နို့မှတဆင့် ဗိုက်ကို ယက်လိုက် စုတ်လိုက် ချက်ကိုယက်လိုက် နှင့် တဖြည်းဖြည်းချင်းဆီးခုံပေါ်ရောက်လာပါသည်။ ကျနော်ကအန်တီ့ဘေးမှနေ၍တဖြည်းဖြည်းယက်လာရာ ကျနောခေ့ါင်းသည် အန်တီ့ပေါင်ကြားသို့ရောက်လာပြီး ကျနော်၏ခြေထောက်မှာ အန်တီ၏ ခေါင်းဘေးတွင် ကျန်ခဲ့ပြီး ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ကျနော်က အန်တီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို မက်မက်မောမော တရှုပ်ရှုပ် နမ်းလိုက်ပြီးမှ စောက်ဖုတ်တပြင်လုံးကို လျှာဖြင့် တပြတ်ပြတ်ယက်လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် အန်တီ့စောက်စိကို လျှာဖြင့်ယက်လိုက် ပါးစပ်ထဲငုံစုပ်လိုက် အန်တီ့စောက်ခေါင်းထဲ လျှာဝင်နိုင်သမျှသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်နှင့် လုပ်ပေးနေရာ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ထဲမှ ချွဲတဲတဲ ချိုမျမျ အရည်များစီးထွက်လာပါသည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ့ စောက်ရည် အရသာကို ကြိုက်လှသဖြင့် ထွက်လာသမျှစောက်ရည်များကို မျိုချနေမိပါတော့သည်။
အင်း၊၊၊၊ ကောင်းလိုက်တာသားရယ်၊ အား၊ အီး။ ရှီး ………….အမလေးကောင်းလိုက်တာ..အီး….
အန်တီမှာလည်း အငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘဲ တလူးလူးတလွန့်လွန့် ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ကျနော်အန်တီ့စောက်ဖုတ် ကြီးအားယက်ကောင်းနေစဉ် အန်တီက ကျနော့ ခြေထောက်တချောင်းအား သူ့ခေါင်းပေါ်ဆွဲယူ၍ ကျနော့ပေါင် ကြား သူ့ခေါင်းကိုထည့်လိုက်ပါသည်. ပြီးသည်နှင့် ကျနော့လီးအားသူ့ပါးစပ်ထဲထည့်၍ စ စုပ်ပါတော့သည်။ ကျနော်က အန်တီ့စောက်ဖုတ်ယက် အန်တီက ကျနော့လီးစုပ်နှင့် ကျနော်တို့နှစ်ယောက် စိမ်ပြေနပြေအလုပ် ဖြစ်နေကြပါသည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်မှာရေဆေးထားသောကြောင့်အနံ့အသက်ကင်းနေပြီး စောက်ရည်ချွဲချွဲ များတစိမ့်စိမ့်ထွက်နေသဖြင့် အလွန်ပင်စုပ်၍ ကောင်းနေပါသည်။ အန်တီကလည်း ကျနော့လီးကို မက်မက် မောမောပင် စုပ်လိုက် ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဂွင်းထုလိုက်နှင့် ကျနော့မှာလည်း နိဗ္ဗါန်ရောက်နေရပါတော့သည်။ ဤတကြိမ်တွင်တော့ကျနော်တို့သည် ကားပေါ်မှာကဲ့သို့ အချိန်ကိုလည်းကြည့်စရာမလို လူကိုလည်းဂရုစိုက် စရာမလိုသဖြင့် စိန်ပြေနပြေပင် အချိန်ဆွဲ၍ တယောက်ကိုတယောက် ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် အရသာ ပေးနေလိုက်ကြသည်မှာတော်တော်ကြာပါသည်။ အန်တီတော့မသိ ကျနော့မှာတော့ မေးများပင်ညောင်းလာပါ သည်။ သို့သော်လည်း အန်တီအရသာတွေ့နေပြီး ထွန့်ထွန့်လူးနေသည်ကို မြင်ရသောအခါ မေးညောင်းရကျိုး နပ်ပါသည်။ နာရီကြည့်မထားမိသော်လည်း အန်တီအကြိမ်ကြိမ်ပြီးနေသည်ကို ကျနော်က မရပ်ဘဲ ဆက်တိုက် စောက်ဖုတ်ယက်နေသည်မှာ တနာရီနီးပါးကြာမည်ထင်ပါသည် အန်တီမှာ အကြိမ်ကြိမ် ပီးနေသော်ငြားလည်း ကျနော် ဆက်မှုတ်နေသမျှဆက် အရသာခံနေပါသည်။ တခုသိသာသည်က အန်တီ တခါပြီးကာနီးတိုင်း ကျနော့ လီးကို တခါအစုတ်ရပ်၍ အပြင်ထုတ်တတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အန်တီပြီးတိုင်း သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးဖြင့် ကျနော့ မျက်နှာကို စောင့်စောင့်ပြိးကော့ထိုး တတ်ပါသည်။ ကျနော့စိတ်ထင် အန်တီ ၅ ခါလောက်ပြီးပြီးသောအခါမှ ကျနော်က အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကိုအစုတ်ရပ်လိုက်ပြီး အန်တီ့ပေါင်ကြားမှကျနော့ခေါင်းကို ထုတ်လိုက်ပြီး ကုတင် ဘေးဆင်းလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် အန်တီ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုကိုင်၍ ကျနော့ဘက်ဆွဲယူလိုက်ရာ အန်တီ က သူ့ဖင်ကိုကြွ၍ ကျနော့ဘက် လျှောဆင်းလာပါသည်။ အန်တီ့တင်ပါးကုတင်စောင်းထိရောက်သော အခါ ကျနော်က အန်တီခြေနှစ်ချောင်းကို မ၍ဆွဲဖြဲပြီး အန်တီ့ ကိုယ်လုံးဘက်ကို တွန်းတင်လိုက်ပါသည်။ အန်တီကလည်းအလိုက်သင့်ပင် သူ့ခြေနှစ်ချောင်းကို သူ့လက်များဖြင့် ဆွဲယူ၍သူ့ပုခုံးနားဆွဲကပ်ထားလိုက်ပါ သည်။ ထိုအခါ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖေါင်းကားပြီးပြူးထွက်လာပါတော့သည်။ အန်တီ့စောက်စိကြီးမှာ လည်း စောက်ဖုတ် နှစ်ချမ်းကြားတွင် ပြူးပြီးထွက်နေပါသည်။ ကားပေါ်တုံးက စောင်ခြုံထဲတွင်ယက်ခဲ့ရသဖြင့် ဘာမှမမြင်လိုက်ရသော်လည်း ယခုအခါတွင်တော့ မိုးလင်းနေပြီဖြစ်သဖြင့် ပြတင်းခန်းဆီးကို ဖြတ်၍၀င်လာ သော အလငးရောင်ကြောင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုမြင်နေရသည်မှာ အလွန် ကြည့်၍ ကောင်းလှပါသည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ကျနော့ တံတွေးများ အန်တီ့စောက်ရည်များဖြင့် ပြောင်လက်၍ နေပါသည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း မလိုးနိုင်သေးဘဲ တခါထိုင်၍ ထပ်ယက်နေမိပြန်ပါသည်။ ဤတကြိမ်တွင်တော့ အန်တီ့စောက်ဖုတ်သာမက အန်တီ့ စအိုဝကိုပါ ယက်နေမိပါသည်။ အန်တီမှာလည်း ထွန့်ထွန့် လူးနေပြန်ပါတော့သည်။
အား သားရေ ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလည်း၊ အား ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ သေတော့မှာဘဲ အား ကောင်းလိုက်တာ
ကျနော၏လီးမှာလည်း မာတောင်နေပြီး တဆတ်ဆတ်တုံနေပါသည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးအားစိတ်တိုင်းကျ ယက်ပြီးမှ ကျနော်ထလိုက်ပြီး အန်တီ့ပေါင်ကြားတွင်နေရာယူ လိုက် ပါသည်။ ပြီးကျနော့လီးကို အရင်းမှ လက်ဖြင့်ဆုတ်ကိုင်ပြီး အန်တီ့ စောက်ဖုတ်အမြောင်းကြားတွင် အပေါ် အောက် တချက်နှစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါသည်။ ပြီးမှ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ထဲ ကျနော့လီးကို ဒစ်မြုတ်ရုံ ထိုးသွင်း လိုက် ပါသည်။ ဒစ်တမြုတ်သွင်းပြီး စောက်ဖုတ် အ၀နားတွင်ပင် ခန ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်လုပ်ပေးနေ လိုက်ရာ အန်တီမှာ သူ့ဖင်ကြီးကို ကော့ထိုးပြီး ကျနော့လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲထိုးသွင်းရန် ကြိုးစားနေတော့သည်။
အီး… အား…. သားရေ လိုးပါတော့ သွင်းလိုက်ပါ မင်းလီးကြီးကို အဆုံးထိစောင့်သွင့်လိုက်စမ်းပါ အန်တီမနေနိုင်တာ့ဘူး အား…….. လိုးပေးပါ လိုးပေးပါတော့
ကျနော်က အန်တီ့အားခန ညှင်းဆဲနေလိုက်ပြီးမှ ကျနော့လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ တဖြေးဖြေး သွင်းလိုက်ပါ တော့သည်။ ကျနော့လီးအဆုံးထိဝင်သွားသည်နှင့် အန်တီ့မှာ အီး….. ကနဲ တချက်အော်လိုက်ကာ သူ့ခြေထောက် နှစ်ချောင်းဖြင့် ကျနော့ခါးကို ညှပ်ဆွဲလိုက်ပြီး အတင်း ဆွဲညှောင့်နေပါသည်။ ခနသာကြာလိုက်ပါသည် အန်တီတချီပြီးသွားပြီး သူ့ခြေထောက်ကို ကျနော့ ခါးမှ ဖြုတ်ချလိုက်ပါသည်။ ကျနော့လီးကတော့ တောင်တောင် မတ်မတ်ပင် သူ့စောက်ဖုတ်ထဲတွင် ရှိနေပါသေး သည်။ ကျနော်လည်း သူ့ခြေနှစ်ချောင်းကို ယခင်အတိုင်း ပြန်မ၍ ဖြဲလိုက်ပြီး ကျနော့လီးအားဖြေးညှင်းစွာ အဆုံးထိ ထုတ် လိုက် သွင်းလိုက်ဖြင့် အန်တီ့ အားလိုးပေးနေလိုက်ပါသည်။ အန်တီကလည်း တချီပြီးသွားသဖြင့် အမေါဖြေရင်း ငြိမ်ပြီး ဇိမ်ခံနေပါသည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာစောက်ရည်များဖြင့် ချွဲနေရာ တော်တော်ပင်လိုးလို့ကောင်းလှပါ သည်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးရသည်မှာလည်း စည်းစည်းပိုင်ပိုင်ရှိလှပါသည်။ ကလေး ၃ ယောက်အမေ အိမ်ထောင် သက် နှစ် ၂၀ ကျော်ပြီး သူ့ယောက်ကျားကလည်း အနှစ် ၂၀ လုံးလုံးလိုးထားပေမဲ့ သူ့စောက်ဖုတ် ကြီးမှာ တလက်ကိုင်ဖြစ်သောကြောင့်လားမသိ ချောင်မနေဘဲ အလွန်လိုး၍ကောင်းနေပါသည်။ ကျနော်လိုးနေသည်ကို အန်တီ့မှာငြိမ်ခံနေရာမှ တဖြည်းဖြည်းအောက်မှ ပြန် ကော့ထိုးစပြုလာပြန်ပါသည်။ ကျနော်လည်း အန်တီ့ တုံ့ပြန်မှုအတိုင်း တဖြည်းဖြည်း အရှိန်တင်၍ စောင့်အားကိုလဲတိုးလိုက်ပါသည်။ အန်တီက အောက်မှ တွန်း ဆောင့်လေ ကျနော်ကလည်း အပေါ်မှဖိ၍ ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးနေရာ အန်တီ့မှာအောက်မှ အံကျိတ်၍ တအီးအီးနှင့် ကောင်းကောင်းကြီးအလိုးခံနေပါသည်။
အင်း…သားရေ ကောင်းလာပြန်ပြီ၊ ဆောင့် ဆောင့် နာနာ ဆောင့်လိုးသား အား…. ရှီး… ကောင်းလိုက်တာ။ မင်းလီးကလဲ မင်းအန်ကယ်လီးလောက်ရှိတယ် နဲနဲတောင် ပိုတုပ်မလားမသိဘူး အား… လိုး.. လိုး သား ခပ်ကြမ်းးကြမ်းလေး လိုးပေးစမ်းပါသားရယ်။ အန်တီ တအားခံချင်လွန်းလို့ပါ၊ အား… အား… လိုး လိုး…. အီး…. ကောင်းလိုက်တာ မင်းလီးက ရှယ်ဘဲ အား…….
ပြောနေရင်းနဲ့ အန်တီက အောက်ကနေ ပိုပိုပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းကော့ထိုးလာပါသည်။၊ ကျနော်ကလည်း အန်တီ့အရှိန်နှင့်ကိုက်အောင် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးတော့ရာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လိုးသံသည် တဖေါင်းဖေါင်း နှင့် အပြင်ကသာ တယောက်ယောက်ဖြတ်သွားလျှင်ကြားမှာ သေချာပါသည်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါ၊ အသားကုန်လိုးကြပါတော့သည်။ အရင်ဖါသည်မတွေလိုးခဲ့တုံးက သိပ်မကြာသည့် ကျနော်သည် ခုမှ ဘာဖြစ်တယ်မသိ ဒီလောက်အသားကုန်လိုးနေတာတောင် မပြီးနိုင် ဖြစ်နေပါသည်။ ကုတင်အောက်ကနေ မတ်တပ်လိုးနေရင်းက အားမရတောသဖြင့် ကျနော့်ခြေထောက် တဖက်ကို ကုတင်ပေါ် တင်ပြီး အန်တီ့ပေါင်တချောင်းပေါ် ကျော်ခွလိုက်ပါသည်။ အဲဒီတော့မှ ပိုပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ် ထိပြီး လိုးရတာ လည်း ပိုအားရလာပါတော့သည်။ ကျနော်ကဆောင့်လိုးလေ အန်တီ့မှာ ပိုအားရလာပြီး သူ့လက်နှစ်ဘက်စလုံးနဲ့ မွှေ့ယာကို တဖုံးဖုံးထု၇ိုက်နေပါတော့သည်။ ထု၇ိုက်နေ၇င်းက
အား…. အမေ ရေကောင်းလိုက်တာ သေပါပြီ အီး အီး ကောင်းတယ်အမေရဲ့ အီး ဟီး ဟီး ဟီး….
ကျနော်က ဆောင့်လိုးနေရင်းနှင့် ချက်ချင်းမပြီးအောင် ဆောင့်ချက်ကို ရေနေလိုက်ပါသည်။ အချက် ၆၀၀ ကျော်လောက်ရောက်သောအခါ ကျနော်လည်း မနေ နိုင်တော့ဘဲ ကျနော့လီးထိပ်က တအားယားလာပြီး တကိုယ်လုံးလဲ ကြက်သီးများထလာကာ တုံတက်လာပြီး ကျနော့ လရည်တွေကို အန်တီ့စောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထဲ့ လိုက်ပြီး ပြီးသွားပါတော့သည်။ ပြီးပုံကလဲ လီးကို အန်တီ့စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံးထိဖိကပ် သွင်းထားပြီး လူက ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်နေပါတော့သည်။ တော်တော်ကြာမှ လီးက နဲနဲပျော့လာပြီး အန်တီ့စောက်ဖုတ်ထဲမှ တဖြေးဖြေး ဆွဲထုတ်လိုက်ပါသည်။ အန်တီလည်း ငြိမ်ကျသွားပြီး ကွေးကွေးလေးအိပ်ရင်း အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ရှူနေပါသည်။ ကျနော်ကလည်း အန်တီ့ဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်ရင်း အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး အမေါဖြေ နေလိုက်ရပါတော့သည်။ နားနေရင်းနှင့် ကျနော်အိပ်ပျော်သွားသည်မှာ အန်တီလာနှိုးတော့မှ နိုးပါတော့သည်။ အချိန်က မနက် ၁၁ နာရီရှိနေပြီဖြစ်သည်။
သားရေ ထ ရေချိုးလိုက် အန်တီတို့ တခုခုစားပြီး သွားကြရအောင် နဲနဲတောင်နောက်ကျနေပြီ
ကျနော်တို့ ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်တွင်ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်နှင့် ကော်ဖီတခွက်စီသောက်ပြီး အိပ်များဆွဲ ကာ ဟိုတယ်မှ ထွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ကာနီး ကောင်တာတွင်သော့အပ်သောအခါ ကောင်တာမှ တရုတ် အကိုကြီးက ညီလေးတို့သားအမိတွေအဆင်ပြေရဲ့လားဟု ပြုံ့းစိစိ ဖြင့်မေးပါသည်။ ကျနော်တို့ မီးကုန်ရမ်းကုန် လိုးနေသံကြောင့် သားအမိအစစ်မဟုတ်မှန်းသူတို့သိနေပုံရပါသည်။ ကျနော်ကလည်းခပ်တည်တည်ပင် အဆင်ပြေပါတယ်အကို ဟုပြောလိုက်ရပါသည်။ အန်တီကတော့ အနားမှာမရှိသဖြင့် မသိလိုက်ပါ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဟိုတယ်အပြင်မှ ကားတစီှးှုားလိုက်ကြပြီး အန်တီပြောသည့် အတိုင်း အန်တီတို့အဖွားအိမ် ကိုသွားလိုက်ကြပါသည်။ အန်တီ့အဖွားအိမ်ကလည်း မန္တလေးမြို့ပြင်ထင်ပါသည် ကားနှင့် တနာရီနီးပါး သွားရပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အန်တီက ရဲရဲတင်းတင်းပင် ဟိုတယ် တက်တည်းရဲခြင်း ဖြစ်ပုံရပါသည်။
အန်တီတို့အဖွားအိမ်မှာ ခြံဝိုင်းကြီးထဲမှ နှစ်ထပ် သစ်သားအိမ် အမည်းကြီးဖြစ်ပါသည်။အဖွားက အန်တီ့အဒေါ် မိသားစုနှင့်အတူနေသူဖြစ်ပါသည်။ ခြံဝိုင်းကြီးမှာတော်တော်ကျယ်ပြီး သစ်ပင်ကြီးများဖြင့် အုပ်ဆိုင်းနေပါသည်။ အန်တီ့အဒေါ်နှင့်အတူ အန်တီ့ ညီမ၀န်းကွဲများ တူတူမများက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀ိုင်းနှုတ်ဆက်ကြပါသည်။ အစတွင် သူတို့က ကျနော့ အား မောင်မောင်ဟုထင်နေကြပါသည်။ အန်တီက ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အမှန် အတိုင်း မပြောဘဲ ကျနော်သည် အန်ကယ်ထွန်းတူဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြလိုက်ပါသည်။ အဖွားမှာနေသိပ်မကောင်းသဖြင့် အိပ်ယာထဲတွင်သာ အနေများပါသည်။ အဖွားအိမ်ကကြီးသော်လည်း မိသားစုကများလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်သည် ကျနော့ထက်တနှစ်ခန့် ငယ်သော အန်တီ၏တူ တယောက်နှင့် အတူတခန်းထဲအိပ်ရပါသည်။ သေချာသည်ကတော့ ဒီအိမ်တွင် အန်တီ့အားနောက်တကြိမ် လိုးရဘို့ဆိုသည်မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရောက်ချင်းပင် အန်တီ့က ကျနော့အား သူ့တူများထံအပ်လိုက်ပြီး ကဲသားတို့ရေ မင်းအကိုကို မင်းတို့လက်ထဲအပ်လိုက်ပြီ၊ ဒီမှာရှိနေတုံး မန္တလေး စစ်ကိုင်း နေရာစုံအောင်သာလိုက်ပြလိုက်ကြတော့။ မင်းအကို မပျင်းစေနဲ့နော် ဟုဆိုသဖြင့် အဖွားတို့အိမ်တွင် နေခဲ့ရသောတပါတ်လုံး စက်ဘီးဖြင့်တဖုံ ကားဖြင့်တနည်း မန္တလေးတခွင်ပြဲပြဲစင်အောင်ရောက်ခဲ့ရပါတော့သည်။ တနေကုန်လျှောက်သွားနေရသော်လည်း ကျနော့စိတ်မှာ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးထံသာရောက်နေပြီး ညဖက် တွင် အိမ်သာထဲတွင် အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးအား မြင်ယောင်ကာ ဂွင်းသာ အကြီမ်ကြိမ်ထုနေ၇ပါတော့သည်။ တကြိမ်လူခနလစ်တုံးအန်တီ့အား
အန်တီရယ် သားအန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အရမ်းသတိရတယ် ဟု ချွဲချွဲပစ်ပစ်ပြောလိုက်ရာ အန်တီက ပြုံးကြည့်ပြီး
ခနသည်းခံနော် အပြန်မှ ဟုပြောပါသည်။
ပြန်မည့်နေ့ရောက်သောအခါ သူတို့က လက်မှတ်ဝယ်ပေးထားပြီး ကားကြီးဝင်းထိလိုက်ပို့ဖို့ပြင်ကြပါသည်။ အန်တီက သူတို့ကို လိုက်မပို့ရန်တားလိုက်ပြီး အိမ်မှာတွင်ပင်အပြီးနှုတ်ဆက်ကာ သူတို့ငှားပေးသော ကားဖြင့် ထွက်လာခဲ့ကြပါသည်။ ကားဂိတ်သို့ရောက်သောအခါ ကားထွက်ခါနီးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အန်တီက မနက်ဖန် ကားနှင့်မှလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သွားပြော၍ လက်မှတ်အသစ်ထပ်ဝယ်လိုက်ပါသည်။ လက်ရှိလက်မှတ်ကိုတော့ အဆုံးခံလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် ကားတစီးပြန်ငှားကာ ယူနတီ ဟိုတယ် သို့ ပြန်လာခဲ့ကြပါသည်။ ဟိုတယ်တွင်အခန်းယူသောအခါ အန်တီကတော့ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း ကျနော့မှာတော့ မျက်နှာနည်းနည်း ပူနေမိပါသည်။ ဟိုတယ်အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် အန်တီသည် ကျနော့ကို အတင်းဆွဲဖက်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ နမ်းပါသည်။ ပြီး ကျနော့ အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကို အတင်းဆွဲချွတ်ပါတော့သည်။ ကျနော်လည်း အားကျမခံ အန်တီ့အ၀တ်အစားများကို ချွတ်ပေးလိုက်ရာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သည် ချက်ချင်းပင် ၀တ်လစ်စားလစ် ဖြစ်သွားပါတော့သည်။ အန်တီ့မှာ တရှူးရှူးနှင့် အသက်ရှူပြင်းနေပြီး တော်တော်ခံချင်နေပုံရပါသည်။ အန်တီက ကျနော့အား ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ပြီး ကျနော့ကိုယ်ပေါ်ပြောင်းပြန်ခွကာ ကျနော့လီးအား စုတ်ပါတော့သည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ကျနော့ မျက်နှာပေါ်ရောက်နေရာ ကျနော်လည်း အန်တီ့နည်းတူ အန်တီ့စောက်ဖုတ် ကြီးကို မက်မက်မောမော နမ်းရှုံ့ လိုက်ပြီး စယက်ပါတော့သည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ယနေ့မနက်ကမှ အမွှေးထပ်ရိတ်ထားပုံရပြီး ပြောင်ချောနေပါသည်။ အန်တီကအပေါ်မှ ကျနော်ကအောက်မှ တယောက်ကို တယောက် အပြန်အလှန်ယက်လိုက်စုတ်လိုက်လုပ်နေရာမှ အားမရသဖြင့် ကျနော်က အန်တီ့ကို ဖက်၍ လှိမ့်လိုက်ပြီး အပေါ် တက်လိုက်ပါသည်။ အပေါ်ရောက်မှ အန်တီ့စောက်ဖုတ်အားစုတ်ရသည်မှာပိုအားရလာပြီး အန်တီကလည်း အောက်မှနေ၍ ကျနော့လီးအား အာခေါင်ထဲထိဝင်အောင်စုတ်နေပါသည်။ ကျနော်လည်း တအားဖီးတက်လာပြီး အန်တီ့ပါးစပ်အား မညှာမတာပင် စောက်ဖုတ်ကိုလိုးသလို ကျနော့လီးဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးနေမိပါတော့သည်။ အန်တီ့ပါးစပ်ဖြင့် ကျနော့လီးအား ငုံစုတ်ထားသည်မှာကောင်းလွန်းလှသဖြင့် စောက်ဖုတ် ကိုလိုးရသလိုပင် အရသာတွေ့လှပါသည်။ အန်တီ့ပါးစပ်ကိုအတော်ကြာကြာလိုးပြီးမှ ကျနော့လီးကိုပါးစပ်ထဲမှ ထုတ်လိုက်ပြီး ကျနော်ထလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် အန်တီ့ ဖင်အောက်တွင်ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်လိုက်ပြီး အန်တီ့ ခြေနှစ်ချောင်းအား ခြေမျက်စိမှကိုင်ကာ အပေါ်ဆွဲမလိုက်ပြီး အန်တီ့ ပုခုံးဘေးတွင်တွန်းဖိထားလိုက် ပါသည်။ ထိုအခါ အန်တီ့ တင်ပါးမှာ မွှေ့ယာနှင့်မထိတော့ဘဲ အပေါ်ထောင်နေပြီး အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖေါင်းကားပြီး ပြူးထွက်လာပါသည်။ ကျနော်က ခြေဖ၀ါးနှစ်ဘက်ပေါ်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရင်း ကုန်းထလိုက်ပြီး ကျနော့လီးကို အန်တီ့စောက်ဖုတ် အ၀နှင့် တေ့လိုက်ပါသည်. ပြီး အသားကုန် တချက်တည်းနှင့်တဆုံးဆောင့် သွင်းလိုက်ပါ သည်။ အန်တီ့မှာ အီး ကနည်း တချက်အော်လိုက်ပြီး အံကိုကြိတ်၍ တင်းခံနေပါသည်။ ကျနော်က တဆက် တည်း အသားကုန် တချက်ပြီးတချက် အားပါပါဆောင့်လိုးနေလိုက်ပါတော့သည်။ အန်တီ့ဆီးခုံနှင့်ကျနော့ဆီးခုံရိုက်သံမှာလည်း ပြင်းလွန်းလှသဖြင့် တဖုံးဖုံး တဖတ်ဖတ်နှင့် အတော်ကျယ်ပြီး ဘေးအခန်းများရော အပြင်လျှောက်လမ်းမှပါ ကြားနိုင်မည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤပုံစံနှင့်လိုးနေရသည်မှာ အားပါလှပြီး အရသာလည်းအတော်ရှိလှပါသည်။ တချက်အဆုံးထိဆောင့်ဝင်သွားတိုင်း အန်တီ့မှာ အီးကနဲ အားကနဲ အော်နေသဖြင့် ထိုအော်နေသံကိုကြားရသည်မှာလည်း နားဝင်ပီယံရှိလှပါသည်။ ဤကဲ့သို့အချက်နှစ်ရာခန့်လိုးလိုက်သောအခါ ကနော့်ဒူးလည်းတော်တော်ညောင်းလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်ခန အလိုးရပ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ပါသည်။ ကုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီး ကုတင်အောက်တွင် မတ်တတ်ရပ်ကာ အန်တီ့ကိုယ်လုံးကို ကုတင်စောင်းသို့ဆွဲယူလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် ခြေနှစ်ချောင်းကို ထောင်ပြီး ဆွဲဖြဲလိုက်ရာ အန်တီက သူ့လက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်မှ လှမ်းဆွဲထားလိုက်ပါသည်။ ကျနော်က ချက်ချင်း မလိုးသေးဘဲ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးအား ခနကုန်းယက်လိုက်ပါသည်။ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးမှာစောက်ရည်များကျနော့လရည်များနှင့် ရွှဲရွှဲစိုနေပါသည်။
အား သားရေ မယက်နဲ့တော့ ယားတယ် လိုးသာလိုး အခုနလို ဆောင့်လိုး သား အန်တီမနေနိုင်တော့ဘူး ရှီး လိုးပါတော့ လိုးပါတော့ အီး
ကျနော်လည်း ခနသာယက်လိုက်ပြီး မတ်တတ်ထလိုက်ကာ ကျနော့လီးကို အန်တီ့စောက်ဖုတ်ဝပြန်တေ့ လိုက်ပါသည်။ ပြီး လက်နှစ်ဘက်ကို အန်တီ့ပေါင်ပေါ်ဖိပြီး အရှိန်မှန်မှန်နှင့် လိုးလိုက်ပါသည်။ တအားမဆောင့်ဘဲ မှန်မှန်လေး အဆုံးထိသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နှင့် တော်တော်ကြာကြာလိုးပေးနေလိုက်ရာ အန်တီ့ကလည်း ခြေကျင်းဝတ်ကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် ဆွဲထားရင်း သူ့ဖင်ကို ကော့ကေ့ာပြီးအောက်မှ တုန့်ပြန်လိုးနေပါသည်။ ကျနော်ကလည်းအမောဖြေရင်း အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီး ဆုံးသည်ထိ ကျနော့လီးအားမသွင်းတော့ဘဲ လေးပုံတပုံလောက်သာသွင်းပြီး အန်တီ့ စောက်ခေါင်း အပေါ်နံရံ ကို ပွတ်လိုးနေပါသည်။ ထိုအခါ အန်တီ့မှာ တကိုယ်လုံးတုံလာပြီး
အား အား သားရေ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အား အား ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ ရှီး ရှီး ဟုအော်နေပြီး ကျနော့လီးစောက်ခေါင်းဝထိထွက်လာသည်နှင့် သူ့စောက်ဖုတ်ထဲမှ စောက်ရည်အကြည်များ အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့် ပန်းထွက်လာပါတော့သည်။ သူ့စောက်ရည်များသည် ကျနော့ဗိုက်ကိုပန်းနေရာ တချို့မှာ ကျနော့မျက်နှာကိုပါတက်စင်ပါတော့သည်။ သူ့မှာလည်း တအံ့တသြော မျက်လုံးပြူးနေပြီး သူ့တကိုယ်လုံးမှာ တဆပ်ဆပ်တုံနေပြီး မျက်လုံးမှာလည်း မျက်ဖြူလံနေပါတော့သည်။ ကျနော်ကလည်း အားရပါးရရှိလှသဖြင့် စောက်ရည်အပန်းရပ်သွားသည်နှင့် ယခုပုံစံအတိုင်း နောက်တခါ အဆုံးထိမသွင်းဘဲ အ၀နားတွင်ပင် ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ထပ်ညောင့်ပေးလိုက်ရာ အန်တီ့မှာ နောက်တကြိမ်တုံတက်လာပြီး ကျနော့လီး ဆွဲထုတ် လိုက် သည်နှင့် စောက်ရည်များ အရှိန်နှင့် ပန်းထွက်လာပြန်ပါသည်။ ဤတကြိမ်တွင်တော့ ကျနော်ကထိုင်ချ လိုက်ပြီး ပန်းထွက်လာနေသော အန်တီ့စောက်ရည်ကို ကျနော့မျက်နှာနှင့် ဆည်းခံလိုက်ပါသည်။ စောက်ရည်များမှာ ပူနွေးနေပြီး အနည်းငယ် ငံကျိကျိရှိပါသည်။ စောက်ရည်အထွက်ရပ်သွားသောအခါ ကျနော်က အန်တီ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ယက်ပေးလိုက်ရာ အန်တီ့မှာ ပက်လက်လှဲနေရာမှ အတင်းထလာပြီး ကျနော့မျက်နှာ ကိုအတင်းတွန်းထားပါတော့သည်။ ကျနော်လည်း အန်တီကောင်းနေသည်ကို ကြည့်၍ အားရသလောက် ရှိလာတော့မှ ကျနော့လီးကို အန်တီ့စောက်ဖုတ်ထဲ တခါထပ်သွင်းလိုက်ပြန်ပါသည်။ ဤတခါတွင်တော့ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးအားဆက်မကလိတော့ဘဲ ကျနော့စိတ်တိုင်းကျသာ မီးကုန်ရမ်းကုန်ဆောင့်လိုးပါ တော့သည်။ လိုးနေရင်း ကျနော့ခြေထောက်တဖက်ကို ကုတင်ပေါ်တင်၍ အန်တီ့အား တပေါင်ကျော်ခွ၍ အသားကုန်ဖိဆောင့်လိုးပေးလိုက်ရာ ကျနော်လည်း မထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ကျနော့ လရည်များပန်းထည့်၍ ပြီးလိုက်ပါတော့သည်။ ပြီးသွားသည်နှင့်ကျနော်လည်းမနေနိုင်တော့ဘဲ အန်တီ့ဗိုက်ပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှူကာ နားနေလိုက်ရပါတော့သည်။ အန်တီမှာလည်း မောနေပြီးမျက်လုံးကို မှိတ်ကာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူ၍ နားနေ ပါသည်။ ခနနေမှ အန်တီ့ကိုယ်ပေါ်မှဘေးသို့လိမ့်ဆင်းလိုက်ပြီး အန်တီ့ အားဖက်ကာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် အနားယူနေလိုက်ကြပါသည်။
သား၇ယ် ကောင်းလိုက်တာ အန်တီတခါတည်းဆွေမျိုးမေ့သွားတယ် သိလား။ မင်းကသိပ်တော်တာဘဲ၊ ပြောစမ်းပါအုံး၊ မင်း ဒါတွေဘယ်ကတတ်နေတာလည်း။ သူများက သူ့ကိုများသင်ပေးနေရမလားလို့မှတ်ပါတယ်၊ ဒီမှာ ဆရာကြီးနဲ့လာတွေ့နေတယ် မင်း အရင်ကလုပ်ဖူးလို့လား ဘယ်တုံးကလည်း ဘယ်သူနဲ့လဲ ပြောစမ်းပါဦး
အင်း ကျနော် အရင်က လုပ်ဖူးတာက ဟို မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေနဲ့ အန်တီရ
ဟင်မင်းက ဖာသည်မတွေနဲ့ လုပ်ဖူးတာလား ရောဂါတွေဘာတွေရကုန်ရင်တော့ ဒုက ပါဘဲ။
မရပါဘူးအန်တီရ ကျနော်တို့က ကွန်ဒုံးအမြဲသုံးတာ၊
နေပါဦး ကျနော်တို့ ဆိုတာ ငါ့သားမောင်မောင်ကောပါလား
ဟီး…ပါတာပေါ့အန်တီရ မောင်မောင်က ဆရာကြီး သူဘဲ ကျနော်တို့ကိုခေါ်သွားတာ
ဟင်…အန်တီကတော့ မင်းတို့ကို ကလေးတွေဘဲမှတ်နေတာ၊ ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာ၊ ခုတော့ သူတို့တွေက အားလုံးသိနေကြပြီပေါ့လေ။ အဲဒီဖါသည်မတွေနဲ့ လိုးပြီးတော့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အန်တီတို့ကို ကြည့်ကြည့်ပြီးထ နေတာမို့လား၊
ဟီး..ဟုတ်တယ်၊ အရင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူး ဖာသွားချပြီးမှ အိမ်မှာ အန်တီတို့ကိုကြည့်ကြည့်ပြီး အိမ်သာထဲမှာ ဂွင်းခန ခန ထုဖြစ်တယ်။ တခါတခါ အန်တီအကျီဝတ်တာ ဘရာမပါရင် နို့သီးခေါင်းအရာလေးကြည့်ကြည့်ပြီး ချက်ချင်းပြေးထုရတာ ဟီး
အင်း မင်းက အန်တီတင်မကဘူး မင်းညီမ ထွေးထွေးကိုပါ စိတ်ကူးနဲ့ပစ်မှားနေတာပေါ့လေ။
ဟီး၊…. ဟုတ်တယ်၊ ထွေးထွေးကလည်းပစ်မှားချင်စရာဘဲလေ၊ သူ့ဟာတွေကလည်း နည်းနည်း နောနော တွေမှမဟုတ်တာ
အင်း သမီးက အမေတူတယ်။ အန်တီလဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပစည်းတွေက တော်တော်ကြီးနေတာ။ မင်းက အဲဒီဖာသည်မတွေနဲ့ ဘယ်နှစ်ခါလောက်လုပ်ဘူးလဲ။
တလတခါတော့ပုံမှန် အမြဲသွားနေကျလေ။ သွားတာ တနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ ၁၂ ခါလောက်ရှိပြီပေါ့။
မင်းက အဲဒီဖါသည်မတွေ စောက်ဖုတ်ကိုလဲ ယက်တဲာလား။
ဟင့်အင်း အဲဒီတုံးက တခါမှမယက်ဖူးဘူး။ လက်နဲ့တောင်မကိုင်ဘူး။ တခါထဲ အခန်းထဲဝင် ထမီချွတ်ပြီး လိုးတာဘဲ။ ပြီးတာလည်း ခနလေးနဲ့ပြီးတာ။ အန်တီနဲ့ကျမှ အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဘာလို့ ယက်ချင်မှန်းကို မသိဘူး။ စောက်ဖုတ်ကြီးယက်နေရရင် ပေါင်ကြားထဲကကို မထချင်ဘူး။
မင်းယက်တာကလည်း အရမ်းကောင်းတာ၊ အဲဒီဘက်မှာ မင်းက မင်းအန်ကယ်ထက်သာတယ်သိလား။
ဒါနဲ့ အန်တီ အန်ကယ်ထွန်းအပြင် တခြားဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ ခုလိုလိုးဖူးသေးလဲ။
မင်းအန်ကယ်အပြင် နောက်တယောက်ဘဲ ခံဘူးတယ်။
အန်၊ ကျနော်က ကျနော့အရင်ပြောတာ၊
မခံဘူးပါဘူးကွာ၊ မင်းတယောက်ထဲပါ၊ မင်းအန်ကယ်က အန်တီ့အချစ်ဦးလေ၊ ပထမဆုံးယောက်ကျားဘဲ။
ဟင်းဟင်းဟင်း… ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူး၊ အန်တီ ၈ တန်းကတည်းက မင်းအန်ကယ်ကလိုးနေပြီ။
ဟင် ဟုတ်လား၊ အန်တီတို့ကမိုက်လှချည်လား၊ အန်တီက ကလေးဘဲရှိဦးမှာ၊ အပျိုတောင်ဖြစ်သေးရဲ့လား။
အင်း အန်တီက ငယ်ငယ်လေးကတည်းကထွားတော့ ၈ တန်းမှာ တော်တော်ကြီးနေပြီ၊ အပျိုလည်းဖြစ်နေပြီ၊ မင်းအန်ကယ်က အန်တီတို့အိမ်မှာ အန်တီ့ကို ကျူရှင်ပြတယ်လေ၊ အိမ်ကလည်း စိတ်ချတော့ လွတ်ထားတာ၊ အဲဒါ ၈ တန်းနှစ်ဝက်လောက်မှာကတည်းက အန်တီတို့ကကောင်းကောင်းလိုးနေကြပြီ၊ စာသင်လိုက် လိုးလိုက်နဲ့ ၈ တန်း ၉ တန်း ၁၀ တန်း တောက်လျောက်ဘဲ။ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတော့မှ အန်တီတို့ယူလိုက်ကြတာ။
မသိလို့နေမှာပေါ့၊ သိလည်း သဘောတူပြီးသားဆိုတော့ အန်တီတို့က သိပ်စိတ်မပူဘူးလေ။
အန်တီက ကံကောင်းတာပေါ့ နော်။ ထွေးထွေးက အန်တီ့လောက်ကံမကောင်းဘူး၊ ခုထိအလိုးခံဘူးပုံမရသေးဘူးနော်။
ဟိတ်ကောင်လေးတော်တော့၊ ဘယ့်နှယ် အမေရှေ့မှာ သမီး အလိုးခံတဲ့အကြောင်းပြောနေရလား။
ဟာအန်တီကလည်း။ ဒီလိုဘဲအပြုသဘောဆွေးနွေးတာပါ၊ အန်တီတောင် ၈ တန်းကတည်းက အလိုးခံပြီး အရသာတွေ့နေတာ၊ ကိုယ့်သမီးကျတော့ မလုပ်ရဘူးလား။း
မလုပ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပေါ်တင်ကြီးပြောတော့လည်း ကြားရတာ တမျိုးကြီးဘဲ
ဟီး…ဟုတ်တယ်နော် တခြားလူသာဆို ခုလောက်ဆို ပါးပိတ်ရိုက်လိုက်ပြီမို့လား။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် ကျနော် ထွေးထွေးကို လိုးဘို့ကျိုးစားကြည့်ဦးမယ်။ အန်တီ ဖြစ်တယ်မို့လား။
အင်း၊ ကျိုးစားတာတော့ကျိုးစားပေါ့ ပေါ်တင်ကြီးမဖြစ်စေနဲ့ မင်းအန်ကယ်တို့ မင်းသူငယ်ချင်းတို့ သိသွားလို့မိုးမီးလောင်နေအုံးမယ်။
ထိုည တညလုံးနှင့် နောက်တနေ့ တနေ့လုံးကျနော်တို့နှစ်ယောက်မှာ စားချိန်သာ တချက်အောက်ဆင်းစားပြီး အခန်းထဲတွင်ပင် အ၀တ်မကပ်နိုင်ဘဲ တောက်လျှောက် လိုးလိုက် အိပ်လိုက်နှင့်သာအချိန်ကုန်ခဲ့ပါသည်။
ညနေတွင် ရေမိုးချိုးပြီး ကားဂိတ်သို့ထွက်ခဲ့ကြပါတော့သည်။ ဤတကြိမ်တွင်တော့ ရသည့်ခုံမှာ ရှေ့ဆုံးမှဖြစ်ပြီး ဘေးတွင်လည်း တညလုံးမအိပ်သော လူငယ်များအုပ်စုလိုက်ပါလာသဖြင့် တလမ်းလုံးဘာမှမလုပ်ဖြစ်လိုက်ပါ။ တနေ့ခင်းလုံးလိုးထားသောအရှိန်နှင့် ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတညလုံးအိပ်လိုက်ကြပါတော့သည်။
မနက် အောင်မင်္ဂလာကားဂိတ်ဝင်ကာနီးတွင်တော့ အန်တီက ကျနော့နားကပ်ကာ တိုးတိုးလေး
သားရေ တော်ပြီနော် အန်တီတို့ရန်ကုန်ရောက်ရင် ထပ်မလုပ်တော့ဘူးနော်၊ အရင်လိုဘဲနေကြမယ်သိလား ဟုပြောပါသည်။
ကြည့်ကြသေးတာပေါ့အန်တီရယ်။ အန်တီကျနော့လီး အလိုးမခံဘဲနေနိုင်မလားဆိုတာ
ကျနော့စိတ်ထဲမှတိပ်တိပ်လေးသာပြောနေမိပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ညီမလေးကိုပါ မည်ကဲ့သို့ကြံဖန်ပြီး လိုးရမည်ကို ကျနော်စိတ်ကူးယဉ်နေမိပါတော့သည်။
ကျနော်တို့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ အန်ကယ်က ကားဂိတ်တွင်လာကြိုပါသည်။
ဘယ်လိုလဲ ကျော်ကျော် နေရာအစုံလည်ခဲ့ရဲ့လား။ ပျော် ရောပျော်ခဲ့ရဲ့လား။
အန်တီ့ကိုလိုးရတာလဲ တော်တော်အရသာရှိပါတယ်။ အဲဒီစကားကိုတော့ စိတ်ထဲကဘဲပြောဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၇န်ကုန်ရောက်ပြီး အရာရာသည် အရင်ကဲ့သို့ပင် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါသည်။ အန်တီသည်လည်း သူပြောခဲ့သလိုပင် ကျနော့အားလုံးဝ အခွင့်အရေးမပေးတော့ပါ။ ကျနော့်စိတ်သည်လည်း အန်တီထက် ညီမလေးကို မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသာ ကြံစည်နေမိပါတော့သည်။
အန်တီ့ကိုလိုးပြီးနောက် ညီမလေးကို မြင်တိုင်း ညီမလေး ကိုယ်ခန္ခာနှင့် အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကို တွဲတွဲပြီး မြင်ရောင်နေမိပါသည်။ ညီမလေးကလည်းညီမလေးပင် တနေ့တချားလိုးချင်စရာကောင်းလာနေပါသည်။ စိတ်က ကလေးစိတ် သိပ်မပျောက်သေးသဖြင့် ကျနော်တို့နှင့်လည်း လက်ပွန်းတတီးနေပါသည်။ သို့သော် အခြေအနေကလုံးဝမပေးပါ။ ကျနော်ကတော့ မကြာမကြာ ညီမလေးသတိပြုမိစေရန် လီးကိုတောင်နေ အောင်လုပ်ပြီး သူ့အရှေ့က လျှောက်ပြရုံလောက်သာလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပြီး သူ့ကိုကြည့်သောအခါ သတိပြုမိပုံပင်မရပါ။